नेपालको चाइनिज ताईपेइमाथि २–० को जित | Online News Portal in Nepal. Aba Bishesh Khabar, Harekpal Special Khabar.
२०७८ जेष्ठ २१, शुक्रबार, ९: ०६AM
काठमाडौं । नेपालले विश्वकप फुटबल २०२२ को छनोट खेलमा चाइनिज ताईपेइलाई २–० ले हराएको छ । विश्वकप फुटबल २०२२ को छनोट अन्तगर्त दोस्रो चरणको खेलमा नेपालले चाइनिज ताईपेइमाथि २–० को जित हात पारेको हो ।
प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुतैरीले ६५ औं मिनेटमा सुनिल बललाई बिस्थापित गर्दै नवयुगलाई उतार्नुभएको थियो । नवयुगले मैदान प्रवेश गरेको १६ औं मिनेटमै गोल गर्नुभयो । जितसँगै समूह बी मा रहेको नेपाल चौथो स्थान रहने सुनिश्चित भएको छ । नेपालले छ खेलबाट दुईमा जित र चारमा हारर बेहोरेर छ अङ्क जोडेको छ । नेपालले आफ्नो दुबै जित चाइनिज ताईपेइ बिरुद्ध नै हात पारेको हो ।
समूह बी मा अष्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा रहेको छ । उसले चार खेलबाट १२ अङ्क जोडेको छ । जोर्डन र कुवेत दुबैले पाँच पाँच खेलबाट समान १० अङ्क बटुलेर दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन् । नेपालले चाइनिज ताईपेइ बिरुद्धको खेलका लागि सुरुवाती एघारमा इराक बिरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका दुई जना खेलाडी परिवर्तन गरेको थियो । मनिष डाँगी र नवयुग श्रेष्ठ पहिलो रोजाईमा परेनन । दुबैजनाको स्थानमा सुनिल बल र आशिष लामा पहिलो प्राथमिकतामा परे ।
अघिल्लो लेखमामल अभाव अझै रहिरहने अवस्था
अर्को लेखमाचार केन्द्रीय नेताको नेपाल र खनाललाई पत्र-ओलीसँग सम्झौता गरे हाम्रो राजनीति सिद्धिनेछ